मालिकले कम्पनी फेर्न नदिएपछि कोरियामा एक नेपालीले गरे आ त्मह त्या ! – " सुलभ खबर "
मालिकले कम्पनी फेर्न नदिएपछि कोरियामा एक नेपालीले गरे आ त्मह त्या !
काठमाडौं, १ फागुन । कम्पनीमा जोखिमपूर्ण काम गर्नु परेपछि केशव श्रेष्ठ बिरामी परे । उनी अर्को कम्पनीमा जान खोजे तर त्यसो गर्न उनलाई दिइएन । त्यसपछि उनले आ*त्मह त्या गरे । ‘म नेपालमा गएर उपचार गर्न चाहन्थेँ तर जान पाइनँ, दिन बिताउन मलाई साह्रै गाह्रो भएकाले आजबाट बिदा हुँदै छु,’ उनले सु साइ*ड नोटमा लेखेका थिए ।
ईपीएस प्रणालीमा गएका कामदारले तीन पटकसम्म कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने नियम छ तर यसो गर्न मालिक मञ्जुर हुनुपर्छ । ‘काम निकै जोखिम र कठिन भएपछि मसँगै आएका साथीले कम्पनी फेर्न खोजे, कम्पनीले नदिएपछि छाडेर निस्किए,’ ओखलढुंगाका तामाङले भने, ‘यहाँ बस्न मन छैन । बाहिर जान कम्पनीले दिएकै छैन’, कान्तिपुरमा खबर प्रकाशित छ ।
तीन पटक कम्पनी परिवर्तन गरेपछि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा फेरि कोरिया आउन मिल्दैन । अझ कृषि क्षेत्रमा आएका कामदार उत्पादन क्षेत्रमा जान पाउँदैनन् । कृषि क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू हुँदैन । ओभरटाइम पाइँदैन, उचित वासस्थान हुँदैन, बिमा सुविधा पनि पाइँदैन । आप्रवासी ट्रेड युनियन (एमटीयू) का अध्यक्ष उदय राईका अनुसार ईपीएस प्रणालीको सबैभन्दा खराब पक्ष रोजगारदाता हावी हुन पाउनु हो । ‘ईपीएस प्रणालीको एउटै राम्रो पक्ष भनेको कामदारको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छ ।
भाषा परीक्षा गर्ने जो कोही पनि आउन सक्छ । नेपालबाट कोरिया ल्याउने प्रक्रियासम्म ठीक छ,’ उनले भने, ‘कोरिया ल्याइसकेपछि भने कामदारलाई बन्धनमा पारिनु सबैभन्दा गलत हो । यसले कामदारको शोषण गर्न सहज बनाइदिएको छ ।’
महिला कामदारमाथि ब ला त्का*र भए पनि सहनुपर्ने बाध्यता रहेको राईले बताए । ‘एउटा रोजगारदाताले नेपाली महिलासँग कम्पनी परिवर्तनका लागि मात्रै १० लाख रुपैयाँ मागेको थियो । हामीले भिडियोसहित स्थानीय अदालतमा उजु*री गरेपछि मात्रै ती महिलाले न्याय पाइन्,’ उनले भने |